သန္ဓေတားထိုးဆေးနှင့်ပက်သက်၍မကြာခဏတွေ့ရသောမေးခွန်းများ - intouchmedicare
Last updated: 25 Mar 2022 | 1378 ကြည့်ရှုခြင်း |
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကိုယ်ဝန်တားခြင်းမှကာကွယ်သောနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။မည်သည့်နည်းလမ်းအားရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ သင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှု့ရှိစေရန်နှင့် အမြင့်ဆုံးထိရောက်ကာကွယ်မှု့အားရရှိစေရန်အတွက် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားနှံ့စပ်စွာကြိုတင်လေ့လာထားရန်လိုအပ်ပါသည်။သန္ဓေတားဆေးထိုးလိုသောသူများအတွက် သင့်အားစိုးရိမ်ပူပန်စေသောသံသယအချက်များရှိသေးပါက သန္ဓေတားထိုးဆေးနှင့်ပက်သက်၍မကြာခဏတွေ့ရသောမေးခွန်းများအား သင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးသောနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အချက်အလက်များအဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှဤဆောင်းပါး၌စုစည်းဖော်ပြထားပါသည်။
သန္ဓေတားထိုးဆေး2မျိုးရှိပါသည်။၄င်းတို့မှာ-
သန္ဓေသားတားထိုးဆေး 1 လ ကြာတားဆေးသည် ပေါင်းစပ်ဟော်မုန်းသန္ဓေသားတာဆေးများဖြစ်ပြီးအများအားဖြင့် လက်မောင်းရင်းဧရိယာ၌ တစ်လလျှင် 1 ချောင်ထိုးပေးခြင်းဖြင့် 1 လကြာသာကာကွယ်နိုင်ပြီး နို့တိုက်နေသောမိခင်များနှင့်မသင့်တော်ပါ။
သန္ဓေသားတားထိုးဆေး3လ ကြာတားဆေးသည်တင်ပါး၌တစ်လလျှင် 1 ချောင်းထိုးပေးခြင်းဖြင့်3လကြာသာကာကွယ်နိုင်ပြီး နို့ထွက်နှုန်းအားထိခိုက်ခြင်းမရှိပါ။သို့ပေမဲ့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ သွေးအနည်းငယ်စီတစ်ပျစ်ပျစ်ထွက်ခြင်းနှင့် အဆုံး၌သူအလိုလိုပျောက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
2. သန္ဓေတားထိုးဆေးထိုးပြီးနောက် လိင်ဆက်ဆံလို့ရနိုင်ပါသလား။
သန္ဓေတားထိုးဆေးထိုးပြီးနောက် ရာသီလာချိန်အပထမ5ရက်အတွင်း အခြားသောနည်းလမ်းဖြင့်ကာကွယ်ရန်မလိုပဲ လိင်ဆက်ဆံလိုပါက ဆက်ဆံနိုင်ပါသည်။သို့ပေမဲ့ အကယ်၍ အခြားသောအချိန်ပိုင်း၌တားဆေးထိုးထားပြီးနောက်7ရက်ပိုင်းအချိန်အတွင်း လိင်ဆက်ဆံလိုပါက ဥပမာကွန်ဒုံးသုံးခြင်းကဲ့သို့သော ဆေးအာနိသင်ထိရောက်ပျံ့နှံ့မှု့အားအပြည့်အဝရရှိရန်အတွက် အခြားသောနည်းလမ်းဖြင့်ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်းမှကာကွယ်သင့်ပါသည်။
3. သန္ဓေတားထိုးဆေးထိုးရန် ဘယ်အချိန်ကအကောင်းဆုံးပါလဲ။
သန္ဓေတားထိုးဆေးထိုးရန်သင့်တော်သောအချိန်မှာ ရာသီလာချိန်အပထမ5ရက်အတွင်း သို့ပေမဲ့ အကြံပြုထားသောအချိန်အပြင် အကယ်၍မဖြစ်မနေတားဆေးသုံးရန်လိုအပ်ပါက ကိုယ်ဝန်ရှိ(သို့)မရှိခြင်းအားဆရာဝန်နှင့်ဦးစွာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးစစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
4. ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက ဘာတွေရှိနိုင်ပါလဲ။
သန္ဓေတားထိုးဆေးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ ရင်သားနာခြင်း၊တင်းခြင်းများကဲ့သို့သော ရာသီပုံမှန်မဖြစ်ပဲ သွေးတစ်ပျစ်ပျစ်အနည်းငယ်စီထွက်ခြင်း၊အချို့တွင်ခေါင်းမူးခြင်းအပါအဝင် သောက်ဆေးနှင့်အလားတူနီးစပ်မှု့ရှိပါသည်။
အကယ်၍ သန္ဓေတားထိုးဆေးများ၏ထိရောက်မှု့အရည်အသွေးအားတိုင်းတာလျှင် သန္ဓေတားထိုးဆေးအမျိုးအစားနှစ်မျိုးစလုံးသည် ကိုယ်ဝန်တားရာတွင်လည်းထိရောက်မှု့ရှိသော ယာယီသန္ဓေတားဆေးဟုယူဆနိုင်ပါသည်။အခြား ခြားနားချက်များမှာ ထိုးနိုင်သောသန္ဓေတားထိုးဆေးများသည် 1 လကြာသန္ဓေတားထိုးဆေးနှင့်3လကြာ သန္ဓေတားထိုးဆေးနှစ်မျိုးလုံးရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သောက်ဆေးဖြင့်သန္ဓေတားခြင်းသည် 1 ကဒ်လျှင် 1 လသာတားနိုင်ပါသည်။ ဆေးနေ့တိုင်းသောက်ရန်လိုအပ်ပြီးလျှင် အကယ်၍ ဆေးသောက်ရန်မေ့ခဲ့ပါကကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသည်။
မေးခွန်းများပြီးဆုံးပြီးနောက်-အမျိုးသမီးအများစုသံသယရှိသောသန္ဓေတားထိုးဆေးနှင့်ပက်သက်၍ ရရှိသွားသောအဖြေ အချက်အလက်အပိုင်းအစအချို့သည် ထည့်သွင်းစဥ်းစားရန် ပေးစွမ်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။သံသယရှိ၍ထပ်အမံမေးမြန်းလိုခြင်း (သို့) သန္ဓေတားဆေးအကြောင်းနှင့်ပက်သက်၍တိုင်ပင်တွေးနွေးလိုပါက သင်အိမ်နှင့်နီးသော Intouch Medicare ဆေးခန်ဌာနခွဲတိုင်း၌မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။သင်အိမ်နှင့်နီးသောဆေးခန်းဟု Google တွင်ရိုက်ရှာခြင်း (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာဝန်များနှင့်တွေ့ဆုံရန် Walk In(ချိန်းယူခြင်းမပြုပဲ)ဝန်ဆောင်မှု့အားရယူနိုင်ပါသည်။